पति विदेश हिडेको ३ दिनमै जेठी पत्नीले गरिन सौताको हत्या
सर्लाही- सर्लाहीको चक्रघट्टा गाउँपालिका–४ सुन्दरपुरकी एक महिलाको धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या भएको छ ।
शेख बलालकी जेठी श्रीमती ३५ वर्षीया कोरैसा खातुनले २२ वर्षीया सौता खुर्सिदा खातुनको धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ ।
पराल काट्ने फलामको गरास ९धारिलो हतियार० ले हत्या गरी झोलामा हालेर फाल्न लागेको अवस्थामा मृतक खुर्सिदाको शव बरामद भएको सर्लाहीका प्रहरी उपरीक्षक गोपालचन्द्र भट्टराईले जानकारी दिए । “खुर्सिदाको घाँटी, टाउको, छाती र हातमा गहिरो काटिएको छ । खुर्सिदाको विभत्स तरिकाले हत्या गरिएको हो”, उपरीक्षक भट्टराईले भने ।
घरमा कोही नभएको अवस्थामा कोरैसाले खुर्सिदाको हत्या गरेकी हुन् । जेठीको सन्तान नभएपछि श्रीमान् बलालले तीन महिना पहिले मात्र खुर्सिदासँग बिहे गरेका थिए । तीन दिन पहिले मात्र बलाल विदेश गएको मौका छोपी जेठीले कान्छीको हत्या गरेको प्रहरी उपरीक्षक भट्टराईले जानकारी दिए ।
हत्या गरेर बोरामा हाली घर नजिकै फालेको अवस्थामा उनको शव बरामद भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । हत्यामा प्रयोग गरिएको हतियार लुकाएर राखिएको अवस्थामा प्रहरीले बरामद गरेको छ । हत्यामा संलग्न कोरैसालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय मलङ्गवाको हिरासतमा राखी थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।
डाक्टर बलात्कारका आरोपीलाई सडकमै गोली ठोक्ने यी 'इ...
मानसिक सन्तुलन ठीक नभएका छोराले खुकुरी हानेर गरे...
पहिलो डीएसएस डाटा कल आयोजनाका लागि ओपोद्वारा वैश्...
नेतृत्वको अक्षमताका कारण उपनिर्वाचनमा कांग्रेस चुक्यो– चन्द्र भण्डारी [भिडियो अन्तर्वार्ता]
सरकारको नेतृत्व बदल्ने कुरा यो कार्यकालमा सोच्दैनौं : नेकपा महासचिव पौडेल [अन्तर्वार्ता]
मंसिर १५, २०७६
के गगनचुम्बी महल र चिल्ला सडक मात्रै समृद्धिका सूचक हुन् ?
उपचुनावमा कांग्रेसलाई दुई दर्जन मत !
वैकल्पिक शक्तिलाई उपनिर्वाचनले दिएको सन्देश र अबको बाटो
उपनिर्वाचनको सन्देश : सत्तारुढ नमात, प्रतिपक्षी सच्चिऊ
झण्डा हल्लाउनमै सीमित नहोस् नयाँ मन्त्रीको काम
मंसिर ६, २०७६
एउटा यस्तो जेल जहाँ जो पनि बस्न चाहन्छ !
शकुनीकै कारण भएको थियो महाभारत युद्ध, कौरबको पक्षमा लगेपनि चाहन्थे वंशको विनाश !
सलादमा काँचो प्याज : ६ रोगमा यस्ता छन् स्वास्थ्य फाइदा
८१ स्वर्णसहित भारत शीर्ष स्थानमा, सागमा नेपाललाई ४१ स्वर्ण [पदकको सूचीसहित]
गौरिका, जसले नेपाललाई सागमा स्वर्ण पदक दिलाइन
किन हुन्छ ‘हर्ट अट्याक’ कसरी बच्ने ?
प्रवक्ता बाँस्कोटाको प्रस्टोक्ति : ‘वर्तमान सरकार देशभक्तहरूको हो’
चुनावमा झूटो आश्वासन बाँड्नु गलत : अध्यक्ष बिजुक्छे
बिच भलिबलमा नेपालको जीत